SOOMAALAAY MA SIDAN BAAD DAN MOODEEN?
Maryan xaaji Cumar (Ifiso)
Assalaamu Caleykum Waraxmatullahi Wabarakaatuhu.
Inta xusuusataahi waxaa Ramadaankii 2002 ka dhacay madasha shirka ee Kenya in ergadii Soomaaliyeed ee shirka iyaga oo afurkii saf dheer ugu jira ayaa lagu yiri “War orda oo naga taga oo guryihiina cunto u doonta”.
Mar kale iyo soonkan, ayaa in badan oo ka mid ah kuwii shacabku ka sugayay inay ka soo taliyaan arrimahan murugsan ee siyaasadda Soomaliya ayaa waxaa afur la’aan loogu daray in laga laabto sariirihii oo ay meel kula hoydeen doofaarka jooga xerada iyadoo weliba ay u dheer tahay roobab iyo dhaxan. Kuwii ugu roonaa ayaa waxaa uu waagu ugu baryaa iyagoo ku hurda kuraasta maqaayadihii ay shaaha ka cabi jireen.
Haddaba waa su’aale Soomaalaay ma sidan baad garateen oo aad dan moodeen? Waxaa yaab iyo amakaag leh markii kuwii laga saaray hoteelada, cuntadana loo diiday ay u tageen madaxdii IGAD iyagoo ku qeylinaya “Ma haysanno wax aan ku afurno, ma haysanno meel aan seexanno, waxaan ku rafaadsannahay magaallada Nairobi”. Waxaan kuwan weydiinayaa yaad eersataan oon idinka ahayn? Yaad wax u dhiibateen ood ka rabtaan? Yaa dalkoodii iyo dadkoodii soo burburiyey oo sababay xitaa inaad waxaad ku afurtaan weydaan? Yaad ka sugeysaan in ay dawlad idiin dhisaan?
Cakuye dadkaygu caqli daranaa, waryaada kuwa aad u tagteen ee IGAD inay dhibtiina ku naaxaan ma ogiye ma iney ka nixi ayaad moodeen? Haddii cunto iyo hotel la idin siiyo oo shirku soo gabagaboobo sow iyagu shaqo la’aan ku dhici meyso. Inaad iska dabawareegataan oo midkiinba maalin shirka ka baxo oo sheekadu iska noqoto Alfa Leyl Wa Leyl ayaa iyagu dan ugu jirtaa.
Afur na siiya ayay ku doodayaan, sow ma oga in ninku gaal yahay oo ALLAH iyo Rasuulkisa diidan yahay. Bal eegga dulinimadaa intaa le’eg oo qof Muslim ah oo maantoo dhan soonaa baryaya nin gaal ah inuu afur siiyo. Walaalayaalow ii sheega heerka kan ka hooseeya ee qof aadami ah oo muslim sheeganaya gaari karo? Waxaad wax u dhinteen sumcaddiina (waaba haddaad leedihiine), tii Islaamka iyo tii Soomalida. Ihaanadaa ku dhacday magacii iyo Diintii Soomaali ay macnaheedu tahay in maanta Ethiopia iyo Kenya iyo wixii la fikrad ahi ay taabteen xaniinyaha raggeenii Soomaaliyeed, una soo baxday fikrad ka duwan tii laga heystay ka hor dagaaladii sokeeya. Waxaa u soo baxday in sarwaalka ugu jiraa wax ka hooseeyo uusan jirin. Maxaan sidaa u leeyahay? U fiirsada nooc kasta oo bulshada ka mid qaar ayaa laga laabtay sariiraha, waxaa ugu dambeeyey odayaashii dhaqanka oo sharaf iyo karaamo ku lahaa dhaqanka Soomalida ayaa lagu yiri 50 ma ogiye intii kale banaanka, iyagii ayaa hor dhooban xafiisyada IGAD. War yaa u haray IGAD oo aysan sharafta ka qaadin? Oggow qof walba oo Soomaali ah meel kasta oo adduunka ka joogo inuu ku gowracan yahay madasha shirka. War IGAD ka hor yaa idin hagi jiray? Ma leedihiin dhaqan, diin iyo xeer aad ku maareysaan arrimihiina idinkoo dal kale dawarsan. Mar haddii min odey dhaqan (nabadoon ama capo qabiil waxaad doontidba ku sheege), siyaasi, aqoon yahay, culimo, haween, dhallinyaro ilaa mooryaan la hor fadhiyo xafiiskii IGAD oo la weydiisanayo wax la cuno iyo meel la seexdo, goormaa laga hadlaa maaxa Soomali u dan ah iyo dib-u-heshiisiin.
Ileyn horaa loo yiri calool baahani ma xishooto, sow wax caqliga geli karo ma aha in haddii kuwan baahan oo afurka heli la’ waxoogaa lacag ah la siiyo waraaqaha laga sixiixdo oo xitaa dalkii inay iibiyaan ayay diyaar u yihiin. Haddaba calool Soomali ALLAH iyo Rasuul ma taqaano ee ninkii wax ku shubta ayay taqaan. Inay sidan tahay IGAD iyo ergada shirka ayaa aragti kuugu filan.
Waxaa gurigoodu ba’ay kuwa (Shacabka) ka war sugaya inay kuwan Nairobi dawarsanaya soo gaaraan talo suuban oo ALLAH (SWT) iyo Addoomankiisu raali ka yihiin soo gaaraan taasoo Soomali bedbaadin karta oo qaranimadii iyo sharaftii aanu lahayn soo celin karta.
Haddaba shacabyahow waad aragtaan meel taladaadu mareyso ee maxaa kuu dan ah ama kula gudboon? Waxaan jawaabta u daayey akhristaha.
“AAN OOYEE ALBAABKA II XIRA”
QORAALADII HORE EE MARYAN IFISO